1 KORINTIANA 4.1-13	F. 3 | Fitandremana Ankadifotsy
1 KORINTIANA 4.1-13	F. 3
Mpitandrina mahatoky (1-5). Ny dika-teny grika dia manome famaritanana maromaro ny teny hoe “mpanompo” : “mpitantana”, “mpitandrina”, “andevo” izay manondro olona manantanteraka asa araka izay takian’ny tompony. Amin’ny maha-mpanompon’i Jesoa Kristy antsika dia tokony ho hita mahatoky eo amin’ny fiaintsika manontolo isika. Samy mpitantana avokoa na kely na lehibe, ary samy handray ny derany avy amin’Andriamanitra. Izy ilay mandinika ny fo sy ny voa no mpitsara marina. Koa ahoanao inona ny fitsekerana na fanakianana ataon’ny manodidina?
Aoka hikatsaka ny sitrapon’ny Tompo amin’ny fanompoana fa tsy hitady sitraka aman’olona na hanandra-tena foana.
Nahazo fanomezam-pahasoavana (6-8). Inona no fototry ny disadisa tao Korinto? Ny fiheveran-tena ho zavatra manoloana ny kely azo! Nampahatsiahivin’i Paoly fa fahasoavana avy amin’Andriamanitra izay rehetra noraisin’izy ireo. Ny fahazaina sy fahalalana dia avy amin’Andriamanitra irery ihany. Tsy misy tokony hieboeboana izany. Indrisy anefa, eto amin’izao tontolo izao dia mahazo laka ankehitriny ny fifampiderana mari-pahaizana amin’ny taranja samihafa ka mahatonga ny maro hirehareha sy hiseho ambony noho ny hafa, eny na dia eo amin’ny sehatry ny asa fanompoana aza.
Miavaka (9-13). Inona ireo toetra ankapoben’ny mpanompon’Andriamanitra? Ny fanetre-tena sy fahatokiany ary fiankinana tanteraka amin’ny Tompo eo amin’ny asa fanompoany sy eo amin’ny fiainany manontolo. Ny tena mpanompon’i Kristy dia vonona hiaritra sy hitondra ny hazofijaliany!
Firy ireo mpanompon’Andriamanitra fantatrao manana izany toetra izany?
Fampieritreretana : “Fa iza no nampihoatra anao? Ary inona no anananao, izay tsy